Tsy Mampahomby an’i Armenia Ny Fanabeazana Nentim-Paharazana Sy Ny Fahalemen’ny Fanaovan-Dalàna Manoloana Ny Herisetra Mihatra Amin’ny Ankizy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Janoary 2016 5:29 GMT
Sary avy amin'ny pejy Facebook fiaraha-mientana hampitsaharana ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy. Sary nopihana tao amin'ny fampirantiam-bahoaka tao Yerevan tamin'ny 1 Oktobra 2015.
Volana vitsy lasa izay, dia nisy kiraron'ankizy miloko raozy sy soratra an-taratasy nampiarahana taminy nivoaka teo amin'ny Kianjan'ny Repoblika tao Yerevan. Toy izao ny fivakiny, “Tsy afa-nanao ny entimodiko aho. Tezitra i Dada. Nokapohiny teo amin'ny tarehiko aho. Niraraka avy amin'ny oroko ny ra… [voasonia] Mariam, 8 taona, Yerevan”.
Ity seho ity dia anatin'ny fampirantiam-bahoaka nokarakarain'ny vondrona mpikatroka nanao fanaitairana momba ny herisetra ao amin'ny ankohonana ao Armenia. Kiraro am-polony no nalahatra mifanila amin'ny tantara manokan'ny herisetra nihatra tamin'ny tenany, izay noraisin'ny fikambanana tsy mitady tombombarotra avy amin'ny lasibatry ny herisetra atao amin'ny tsy ampy taona.
Sarotra ny milaza ny halalin'ny fihoaram-pahefana mihatra amin'ny ankizy ao Armenia. Milena Abrahamyan, mpanao gazety avy ao Kvinna hatrany Kvinna no nanamarika fa heverina ho raharaha any an-takonana ny herisetra ao an-tokatrano ao amin'ny fiaraha-monina Armeniana :
Tsy mora ny miasa hanoherana ny herisetra an-tokatrano aty Armenia, indrindra raha olona maro dia maro no tsy manaiky ny fisian'izany.
Araka ny nambaran'ny tatitra navoakan'ny mpiantsoroka ny zon'ny ankizy isan-taona tamin'ny 2014, dia raharahan-kerisetra an-tokatrano mihatra amin'ny ankizy folo monja no nanaovan'ny polisy ao an-toerana famotopotorana. Mihoatra ny 819.000 ny ankizy eto Armenia. Hoy ny nambaran'ny Mpiantsoroka Karen Andreasyan :
Sarotra vahana ny olona satria tsy re feo ny raharahan-kerisetra ka hohadihadiana avy eo. Ankavitsiana karohina ny ankizy miantso vonjy ary heverina ho fomba fanabeazana ny herisetra ahatran'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka.
Iantohan'ny lalànan'i Armenia ny zon'ny ankizy ao amin'ny Fehezan-dalàna misahana ny fianakaviana, fehezan-dalàna misahana ny asa, ary ny fehezan-dalàna misahana ny ady heloka bevava. Amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny Firenena Mikambana, dia narahin'ny firenena ireo tolo-kevitra hiarovana ny ankizy amin'ny alalan'ny fanitsiana ireo lalàna lehibe ao an-toerana, niezahana hiarovana bebe kokoa ny ankizy tsy ho tratran'ny fanararaotana, fihoaram-pahefana, ary ny fanondranana.
Tamin'ny herintaona i Armenia no noheverina hamarana ny dingana 11 taona hampivelarana sy iantsorohana Drafi-Pirenena Feno Iasana Hiarovana Ny Zon'ny Ankizy. Hita ao amin'ny planina stratejikan’i Armenia ny fampiroboroboana ny famotorana ireo raharahan-kerisetra mihatra an-tokantrano, amin'ny fametrahana laharam-piantsoana any amin'ny hopitaly, komisarian'ny polisy, sy any amin'ny fiadidian'ny tanàna any ifotony, sy fijeren'ny mpitsabo saina any amin'ny toeram-pampianarana, sy amin'ny fanaovana hetsika fanairana sy fandraisana sy fikarakarana vonjimaika ireo lasibatra. Mbola maro ireo tolo-dalàna miandry ny iadian-kevitra momba azy, na dia lokoin'ny sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana misahana ny ankizy, UNICEF, ho manjombona aza ireo lalàna fiarovana ny ankizy efa nolanian'i Armenia.
Na dia eo aza ireo fivoarana sy fisian'ny finiavana ara-politika ireo, dia mbola mitoetra ho olana ny fampiharana ny lalàna noho ny mbola fahavitsian'ny olona miasa momba izany sy ny fahakelezan'ny tetibola natokana ho amin'izany, ary tsy ampy ny fepetra voalazan'ny lalàna hamadihana azy ho vokatra hiarovana ny ankizy.
Na dia eo aza ireo sakatsakana ireo dia manao araka izay tratrany ny tanora mpikatroka ao Armenia, miantso ny fiaraha-monina hanitsy ny fomba fanabeazana ankizy, ary mangataka ny hanaovan'ny governemanta dingana bebe kokoa amin'ny fiarovana ny tsy ampy taona mora iharan'ny herisetra. Hatramin'izao izany ezaka izany dia mbola mifantoka amin'ny fanaitairana ny fisian'ny fihoaram-pahefana atao amin'ny ankizy, kiraro mivady miloko raozy amin'ny fotoana iray.
18 ora izayArmenia